Resaky ny mpitsimpona akotry : fitsinjovana ny olona | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fitsinjovana ny olona
Miaina ao anatin’ny fahasahiranana ny ankamaroan’ny olona eto amin’ny nosy, tsy misy afaka handà ny fianjadin’ ny fahantrana. Voalaza anefa fa manan-karena ity nosy ity, izay rehetra nifandimby teo amin’ny fitondrana dia nihazakazaka avokoa teo amin’ny fanambarana ny fampandrosoana ny toe-karena. Tamin’ity farany ity aza dia nisy mihitsy ministera natokana hanatanteraka ny tetik’asa nampanantenain’ny Filohampirenena. Misy ny mpahay milaza anefa fa mivilana ihany izany fanao izany, tsy tokony hiavaka ny tetik’asa apetraky ny Filoha, fa izany dia tafiditra ho azy ao amin’ny rafitra natao ho an’ny fampandrosoana ankapobeny. Lasa fideraderana tena ny fanatanterahana asa, fomba vao nolovaina avy tamin’ny Tetezamita teo amin’ny fanaovana asa «manara-penitra» izay tsy nanaraka fenitra ny lalana nanokanana ny vola nenti-nanana izany hono.
Resaka be daholo famalifaliana tena ireny rehetra ireny, tsy nameno vary ny vilia, tsy nampody fandriampahalemana, tsy niaro amin’ny aretina. Any amin’ireo sehatra fotrotry ny fiainana sy filaminan-tsaina izany no andrasan’ny vahoaka hiseho ny fiovana.
Efa leo angamba ny olona tamin’ny fahenona ny teny hoe « révolution » izay tsy nanova inona ary nety nampihemotra mihitsy aza araky ny fahatsapan’ny maro azy. Tsy mampitotongana any amin’ny ratsy ihany anie izany fa mety koa mampivadika ny ratsy ho tsara ny «revolution». Samy milaza daholo fa tsy mandeha amin’izay laoniny ny raharaha. Tsy hiova ho azy eo izany raha tsy misy ny fiovana lalana, fiovan-tsainan’ny fitondrana. Manta vary indray mandeha ve dia handevin-tsotrobe?
Tsy afaka anaovana kitoatoa koa anefa izany, na atao tsapatsapa ka izay mandalo ao an-doha dia tanterahana avokoa. Mila fandinihina lalina. Efa ela anefa izay niandrasana izay, efa betsaka koa ny fitsapatsapana vita. Sady tsy maintsy handinika no tsy maintsy hanao asa hitondra vokatra haingana. Mifanipaka izany tanjona enjehina izany. Toe-tsaina sy fahaizana mbola tsy naseho izany, mitaky fiovan-toetra mahery vaika eo amin’ny mpitondra izany. Toe-tsaina vaovao, fianarana fahendrena tena izy ary any amin’ny vavany fa tsy akandasitra, mahaiza manao ary manàna herin-tsaina sy fahatozoana Ravaly.